Iincwadi ezisi-7 zexabiso eliphantsi zokonga imali | Zonke iReaders
IiVillamandos | | I-eReaders
Ngaba ujonge iincwadi ze-e zexabiso eliphantsi? Kumaxesha akutshanje kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukuba nencwadi ye-elektroniki okanye i-eReader, nangona eyona ndlela ichanekileyo yokuthiya esi sixhobo yi-eBook, ke siya kuyisebenzisa eli gama kulo lonke inqaku, ukufunda kunye nokonwabela ukufunda ngalo naliphi na ixesha nendawo kwezona indlela entofontofo. Inani lezixhobo zolu hlobo ezikhoyo kwintengiso ziyanda, kodwa namhlanje sifuna ukukunika ii-eBooks ezingabizi kakhulu kwaye oko kusivumela ukuba sikonwabele ukufunda kwidijithali ngaphandle kokuchitha imali eninzi.
Yiyo loo nto emva kweentsuku ezimbalwa siphanda uthungelwano lothungelwano kwaye sizama nencwadi engaqhelekanga ye-elektroniki sithathe isigqibo sokupapasha eli nqaku siqokelela kulo Ziyi-7 iincwadi ze-elektroniki ezingabizi kakhulu nezifanelekileyo ukuze ukonwabele ukufunda ngokwamanani. Ukuba ufuna ukuthenga i-e-ncwadi yakho yokuqala okanye awufuni kuchitha imali eninzi kakhulu, khupha ipensile nephepha ukuze ubhale amanqaku kuba esinye sezixhobo esiza kukubonisa sona sinokukulungela Nokuba yeyiphi na imeko.
1 Ixabiso eliphantsi le-eBooks
2 Uhlobo oluSisiseko
3 Uhlobo lweWebhuwwhite
4 UKobo Leisosa
5 Amandla eReader Max
6 IBillow E03FL
7 Isiseko sePocketBook Lux 2
8 Inkqubo yamandla
Ixabiso eliphantsi le-eBooks
Uhlobo, ngoku ngokukhanya ...
Iphepha elitsha lohlobo ...
Kobo Clara HD | I-eReader |...
Uhlobo lweOasis, ngoku nge ...
Kobo Nia | I-eReader |...
Uhlobo, luhlaziyiwe ...
Amazon Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zibalulekileyo kwimveliso yeemarike zeencwadi zombane kwaye inikezela ngezixhobo ezahlukeneyo ngokuxhomekeka kuhlobo ngalunye lomsebenzisi kunye nezinto esifuna ukuzisebenzisa. bucala ngasekhohlo Uhlobo oluSisiseko, ehlaziyiweyo kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, sisixhobo esifakelwayo ukuyibiza ngandlela thile kwaye iya kusivumela ukuba siqalise kwihlabathi lokufunda ngokwamanani ngelixa sichitha isixa esincinci semali.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufunda incwadi?
Olu hlobo lusisiseko lunokuba lolulungele bonke abasebenzisi abangabuzanga kakhulu kwiincwadi zabo ze-elektroniki kwaye bajonge kuphela i-eBook abanokuyisebenzisa amaxesha ngamaxesha.
Apha sikubonisa ifayile ye- ezona mpawu ziphambili zolu hlobo olusisiseko esele lukhona kuhlobo lwayo olutsha ukusukela nge-20 kaJulayi ephelileyo;
Imilinganiselo: 160 x 115 x 9,1 mm
Ubunzima: 161 gram
Bonisa: I-intshi ezi-6 ngobuchwephesha be-E Ink Pearl enobuchwephesha befonti, isikali esingwevu ezili-16 kunye nesisombululo sama-600 x 800 ee-pixels kunye ne-167 dpi
Unxibelelwano: Izibuko le-USB, iWifi
Imemori yangaphakathi: 4 GB ngomthamo wamawaka eencwadi kunye nokugcinwa kwamafu kwamahala kuwo wonke umxholo weAmazon
Ibhetri: ngokolwazi olunikezwe yiAmazon luhlala iiveki ezininzi ngaphandle kwesidingo sokugcwalisa isixhobo
Umdlali weMP3: Hayi
Iifomathi ze-ebook ezixhaswayo: Uhlobo lwefomathi 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI engakhuselekanga, PRC ngokwendalo; I-HTML, iDOC, iDOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP ngokuguqula
Ixabiso: i-79 euro
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luya kubethwa kukubona kolu luhlu Uhlobo lweWebhuwwhite, Kodwa ngaba kunjalo Esi sixhobo seAmazon siyi-eReader enexabiso eliphantsi, ukuba sithathela ingqalelo izinto ezinomdla asinika zona Ngexabiso esinokuthi aligqithisi. Umgangatho kunye nenkcazo yesikrini ngaphandle kwamathandabuzo, eya kuthi isivumele ukuba sifunde kuyo nayiphi na indawo kunye nendawo kuba isinika ukukhanya okuhlanganisiweyo.
Ngoku siza kuvavanya ezona mpawu ziphambili kunye nokubalulwa kwesi sixhobo seAmazon;
Imilinganiselo: 169 x 117 x 9,1 mm
Ubunzima: 205 gram
Bonisa: isisombululo esine-intshi ezi-6 esine-300 dpi kunye nokukhanya okuhlangeneyo
Unxibelelwano: I-WiFi, i-3G kunye ne-USB
Imemori yangaphakathi: 4 GB; ngomthamo wamawakawaka eencwadi
Ibhetri: IAmazon ifuna kuphela ukuba ibhetri ihlale iiveki ezininzi ngokusetyenziswa kwesiqhelo
Iifomathi ze-Ebook: Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI engakhuselekanga, PRC ngokwendalo; I-HTML, iDOC, iDOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP ngokuguqula
Ixabiso: i-129.99 euro
Ixabiso lale Kindle Paperwhite lixabiso nge-129.99 euros, mhlawumbi ngexabiso elithile, kodwa oko kusinika kona njengembuyekezo kungaphezu kokuthakazelisa. Kananjalo ukuba awungxami ukuthenga i-eReader yakho entsha, kuya kufuneka uyazi ukuba iAmazon amaxesha ngamaxesha iyalinciphisa kakhulu ixabiso lohlobo lwayo, ke mhlawumbi ngesikhalo esincinci kunye nokumamela unokuyithenga ngaphezulu kwexabiso elinencasa .
Kobo Kunye neAmazon, zezona nkampani zimbini zaziwayo kwimarike ye-eReader. Zombini iinkampani, ukongeza ekubeni zinamandla kwaye zibiza kakhulu iincwadi ze-elektroniki kwintengiso, zikwabonelela abasebenzisi ngezinye izixhobo ezingabizi kakhulu ezinomgangatho onomdla ngokulinganayo.
Umzekelo woku yile UKobo Leisosa ukuba ngexabiso elingaphezulu kwe-100 ye-euro encinci, kunokuba yinto elungileyo ukungena kwihlabathi lokufunda ngokwamanani kwaye wonwabele iincwadi zedijithali ubukhulu obukhulu.
Emva koko siza kuvavanya eziphambili Iimpawu kunye nokucaciswa kwale Kobo Leisosa;
Imilinganiselo: 112 x 92 x 159 mm
Ubunzima: 260 gram
Isikrini: 6-intshi Pearl E Ink touch
Ukunxibelelana: I-Wi-Fi 802.11 b / g / n kunye neMicro USB
Imemori yangaphakathi: 8 GB okanye yintoni enye, ukubanakho ukugcina ukuya kuthi ga kwi-6.000 yeencwadi
Ibhetri: ubude bexesha kunye nokusetyenziswa kwesiqhelo ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-2
Iifomathi ze-ebook: EPUB, PDF, MOBI, JPG, TXT kunye neAdobe DRM
Ixabiso: i-99 euro
Amandla eReader Max
Isistim yamandla eReader ...
Inkampani yaseSpain i-Energy Sistem ihlala inikezela ngezixhobo ezinomdla kubo bonke abafundi okoko yadalwa. Kutshanje baye bazisa iincwadi nge-elektroniki kwintengiso, ezinye zazo zinamaxabiso aphantsi kakhulu. bucala ngasekhohlo Amandla eReader Max Yenye yazo kwaye sinokuyithenga okungenani i-euro ezingama-90.
Okulandelayo, siza kuphonononga Iimpawu eziphambili kunye nokubalulwa kwale eReader kwi-Energy Sistem;
Ubungakanani: Ubukhulu: 67 x 113 x 8,1 mm
Ubunzima: 390 gram
Iscreen: 6 intshi ngesisombululo sama-pixels angama-600 x 800
Unxibelelwano: i-USB encinci
Imemori yangaphakathi: I-8 GB iyandiswa ngamakhadi e-MicroSD
Ibhetri: umthamo omkhulu oya kusivumela ukuba sisebenzise isixhobo kangangeeveki
Iifomathi ze-ebook ezixhaswayo: ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
Ixabiso: i-86,80 euro
Itekhnoloji yeBillow E03E -...
Imakethi yencwadi ye-elektroniki ikhule kakhulu kwiintsuku zamva nje, kwaye ezinye iinkampani zingene kuyo, ezingaziwa luluntu ngokubanzi, kodwa ezisinike izixhobo ezinomdla ngamaxabiso anomdla ngakumbi. Umzekelo woku IBillow E03FL, Ithengiswa yiAmazon, ehlala ihlala ikhuselekile ukhuseleko.
I-BQ Cervantes UkuKhanya kokuKhanya kuvaliwe
Ixabiso layo li-euro ezingama-75 kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, ngabaphi abasebenzisi abaninzi esibakhangelayo, kunokuba ngaphezulu kokwaneleyo. Ukuba nencwadi ye-elektroniki kunokwenzeka, kodwa kunokwenzeka ukuba inekhwalithi engaphezulu komgangatho kunye namandla. Apha ngezantsi sikubonisa iimpawu kunye neenkcukacha zayo ukuze ufunde ngakumbi ngayo.
Imilinganiselo: 165 x 37 x 0.22 mm
Ubunzima: 159 gram
Iscreen: 6 intshi ngesisombululo sama-pixels angama-800 x 600
Imemori yangaphakathi: I-4 GB iyandiswa ngamakhadi e-MicroSD
Ibhetri: I-lithium ion ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-720 zobomi bebhetri
Iifomathi ze-Ebook: CHM, DOC, DjVu, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT, ePub
Ixabiso: i-75 euro
Isiseko sePocketBook Lux 2
IPocketBook Lux Esisiseko 2 -...
Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lokufumana i-eReader lincinci, oku Inkampani yePocketBook e-ncwadi Inokuba lukhetho olukhulu kwaye ixabiso layo li-euro ezingama-89,99 kuphela, nangona usazi ngokuqinisekileyo ngeli xabiso abayi kusinika isixhobo esinamandla kakhulu okanye esinomdla kakhulu ukuba singakonwabela ukufunda kwidijithali.
Ewe kunjalo, ukuba ufuna ukuqala kwihlabathi lokufunda ngokwamanani, okanye awungomfundi othanda ukufunda, esi sixhobo sinokukulungela. Apha ngezantsi ungazi iifayile ze- iimpawu eziphambili kunye neenkcukacha yale eReader;
Imilinganiselo: 161.3 × 108 × 8 mm
Ubunzima: 155 gram
Bonisa: I-inki ye-intshi ezi-6 inesisombululo esingu-758 x 1024
Imemori yangaphakathi: I-4 GB enokwandiswa kokugcina ngokusebenzisa amakhadi e-MicroSD
Ibhetri: 1.800 mAh
Iifomathi ze-Ebook: PDF, TXT, FB2, EPUB, RTF, PDB, MOBI kunye ne-HTML
Ukuba Amandla eReader Screenlight Sisifumana sibiza kakhulu njengesixhobo, sihlala sineendlela ze-e-ncwadi ezingabizi kakhulu ezivela kwinkampani enye. Kwaye kukuba ngokuthoba uzuko lwethu kancinci sinokufumana i-Energy Sistem eReader Slim, incwadi ye-elektroniki enexabiso eliphantsi enezibonelelo ezinokwanela ngaphezu kwawo nawuphi na umntu othanda ukufunda.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngokunzulu ngale nto i-eReader isinika yona, siya kukubonisa yona iimpawu eziphambili kunye neenkcukacha;
Imilinganiselo: 113 x 80 x 167 mm
Ubunzima: 399 gram
Isikrini: i-intshi ezi-6 ngesisombululo sama-pixels angama-600 x 800. U-Eink Pearl HD, inki ye-elektroniki ngamanqanaba angama-16 engwevu.
Imemori yangaphakathi: i-8 GB enokwazi ukuyandisa ngamakhadi e-MicroSD
Ibhetri: I-lithium ehlala ixesha elide
Iifomathi ze-ebook: ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
Ixabiso: i-69.90 euro
Ngokucacileyo asijonganga nenye yezona ncwadi zibalaseleyo ze-elektroniki kwintengiso, kodwa inokuba yinto elungileyo, enokubeka imali kakhulu kwaye iya kusivumela ukuba sikonwabele ukufundwa kwidijithali ngendlela enomdla ngakumbi.
Ngaba sele uthathe isigqibo sokuba yeyiphi i-eReader yazo zonke ezi sikubonisile ukuba uza kuzithenga?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona. Sazise kwakhona ukuba ungongeza ii-eBook ezingabizi kakhulu zolu hlobo kuluhlu, ngamaxabiso ancitshisiweyo, kwaye oko kunokusenza sikunandiphe ukufundwa kwidijithali.
Ukuba ufuna ukubona iimodeli ezininzi ze-eReaders, kwesi sixhobo Uya kufumana ezona zibonelelo zibalaseleyo ukuze ukwazi ukukhetha eyona ilungele oko ukufunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » Iincwadi ze-e ezitshiphu
Molo, ndinomfundi okwesihlandlo sokuqala, ngakumbi i-Energy eReader Screenlight HD kwaye andazi ukuba ndingazithenga njani iincwadi ukuze ndizikhuphele kuyo. Iisayithi ezininzi zindixelela ukuba iincwadi zazo azihambelani ne-eredar yam. Ndincede?, Enkosi
I-Kindle Oasis eNtsha, i-eReader yokuqala yaManzi yaseAmazon